Ny tanjona manko dia ny hananganana “Tranoheva” (Bornes) maro ao Madagasikara ho apetraka eny amin’ny Fokontany na Firaisana izy io natao hamatsiana sakafo sy kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro ho an’ireo olona sahirana ao amin’ny faritra iray.
Azonao azavaina fohifohy ve ny momba ireo “Tranoheva” ireo ?
Ny “Fahamendrehana” dia hiara-hiasa amin’ ireo fikambanana maro efa misy ao Madagasikara satria ireo Tranoheva ireo dia tsy ho atao fahazarana akory fa ho fiaingana mankany amin’ny fiainam-baovao. Noho izany dia hisy ny fanofanana ireo olona ireo mba hahafahany manao ny asa.
Eny, efa anaty fandaharan’asa ny fangatahana fiarahamiasa amin’ izay afaka hirotsaka an-tsehatra an-tsitrapo, hanentana ireo olona karakaraina, hanazava fa ho azy ireo no hananganana izany ka tsy tokony ho simbaina izy ireny, ary ho anjaran’izy ireo ny manadio sy manaja ireo Tranoheva. Tsy ny olona ampiana ihany anefa no ho entanina amin’izany fa ireo manome ihany koa : zava-dehibe ny fitiavana mizara sy manome fa mila fahazarana ihany koa ny manatitra izany ao anaty Tranoheva. Fampianarana ny mponina hifanampy izany mba hahazoan’ny tsirairay ny anjara masoandrony.
Ny fikasana dia ny hitsanganan’ireo Tranoheva alohan’ny Noely 2018 ary ny fanirianay dia mba ho maro isika no hamatsy azy ireny arak’izay vita sy am-pelatànan’ny tsirairay. Ny erikerika manko mahatondra-drano.